दिदिलाई भेटेपछि भाईको आँ:सु थामिएन ला’ इभ दोहोरीमै भयो रुवबाʼसी ! (भिʼडियो सहित) – Ap Nepal
दिदिलाई भेटेपछि भाईको आँ:सु थामिएन ला’ इभ दोहोरीमै भयो रुवबाʼसी ! (भिʼडियो सहित)
काठमाडौं, नेपालमा हिजो आज गीत संगीतको चेत्रमा लोक दोहोरिको डिमान्ड बढ्दो छ,गाउने कलाकार देखी अभिनय गर्ने कलाकार सम्मले राम्रो पारिश्रमिक लिने गरेका छन। भिडियो मेकिङमा पनि राम्रै पैसा खर्च गर्छन् लोकेसन पनि निकै आकर्श्क हुने गरेको छ।
यस्तै युट्युबमा लाइभ दोरी खेलेको भिडियो धेरै छन जस मध्यको एउटा भिडियो युट्युबको दोस्रो नम्बरमा छ। साररंगी संसार नामक युट्युब च्यानलमा बाल कलाकार प्रिनस लम्साल र कलाकार दिपीका बैम्बुले गाएको डाँडै पिपलु बोल्को गीता सबैले रुचाएका छन।
हेर्नुहोस् उक्त लाइभ दोहोरी गीत
Prevक्रमश ओरालो लाग्दै डलरको भाउसँगै यी देशका मुद्राको भाउ
Nextपहिलोपटक मिडियामा आमासँग रमेश ,आमा छोराको माया होस् त यस्तो- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
ट्राफिक प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने एक स्कुटी चालक प,क्राउ
टिका सानुले रमेश प्रसाईको लागि गाईन् यस्तो गीत, इन्द्रेणी’मा लाईभ दो,होरी गाउँदै-हेर्नुहोस् (भिडिʼयो सहित)